United Airlines chọrọ iziga onye kachasị ike na America na Tahiti
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » United Airlines chọrọ iziga onye kachasị ike na America na Tahiti
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akwụkwọ akụkọ French Polynesia • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Millionbọchị ezumike 700 nde anaghị eji ya gafee United States, na-egosi na ndị America na-agbasi mbọ ike ma ghara iwepụta oge
Kwa afọ, ihe karịrị nde ụbọchị ezumike 700 anaghị eji ya gafee United States, na-egosi na ndị America na-agbasi mbọ ike ma ghara iwepụta oge ha rụpụtara ịkwụpụ, zuru ike ma kwụghachi. United Airlines taa kwupụtara Oge Gbanyụọ na Tahiti, asọmpi e mere iji amata onye na-arụsi ọrụ ike na mba ahụ na njem nrọ gaa agwaetiti Tahiti. Enwere ike ide aha ndị mmadụ na webụsaịtị United Airlines.
"Site na njedebe na-enweghị akwụkwọ n'oge ọkọchị na ngwụsị izu a gara aga, ọ na-akụda mmụọ iche na ọtụtụ ndị America agaghị enwe ohere iji ụbọchị ezumike ma wepụta oge site na nkwụsị kwa ụbọchị iji nweta ihe dị iche," ka Toby Enqvist, United's Chief kwuru Onye Ahịa ahịa. “Nke a bụ ihe kpatara anyị jiri nwee ọ excitedụ banyere asọmpi a - ọ na-enye ohere maka onye ruru eru inweta mmeri ọmarịcha ebe izu ike kacha mma na ụwa na Tahiti.”
"Uru dị na ịpụ apụ enweghị atụ - site na imeziwanye arụmọrụ gị na arụmọrụ gị na ahụike na nke mmụọ iji mezi mmekọrịta gị na onye ọzọ," ka Katie Denis nke Project kwuru: Oge Na-adịghị. “United na-enyere aka ịmata banyere mkpa ọ dị iwepụta oge iji gaa njem, nke nyocha anyị gosipụtara bụ ụzọ kachasị dị irè iji ụbọchị ezumike. N'ezie, ndị na-eji ihe ka ukwuu n'oge ezumike ha eme njem na-enwe obi ụtọ dị ukwuu karịa ndị na-eme obere njem ma ọ bụ na ọ dịghị ma ọlị. ”
Gị ma ọ bụ onye ị maara kwesịrị ịnata oge Oge na Tahiti?
Onye mmeri nwere ike ịbụ onye ọ bụla - mama, nwanne nwanyị, nwanne nwoke, nna, nwunye, di, enyi, onye isi, onye ọrụ ma ọ bụ gị - ohere dị na ya enweghị njedebe n'ihi na akụkọ onye ọ bụla bụ ihe pụrụ iche. Ingbanye asọmpi a dị mfe ma na-agba ndị nhọpụta ume ka ha jiri obi ha kwuo ihe mere onye ahọpụtara ji kwesị oge Oge na Tahiti. Iji banye, chọpụta onye kwesịrị njem na oge ezumike - ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ izu 80, nne ma ọ bụ nna na-anọ n'ụlọ, ma ọ bụ onye na-arụ ọtụtụ ọrụ iji mezuo - ma debe okwu 300 maka ihe mere ha ji kwesiri njem ahụ.
Njem njem nke ndụ
Onye mmeri nke United's Time Off na asọmpi Tahiti na ndị ọbịa ha ga-efe site n'obodo ha gaa San Francisco wee gafee Papeete, Tahiti maka njem kachasị. Njem a gụnyere ịga ezumike na United Polaris na San Francisco International Airport, ebe ha ga-ahụ ohere iji zuru ike, rie nri ma nwee ume tupu ụgbọ elu ha gaa Tahiti. Ha ga-efega klaasị azụmaahịa United Polaris gaa Tahiti.
Na mgbakwunye na njem njem njem, ụlọ nkwari akụ maka abalị atọ na Intercontinental Tahiti Resort na Spa, abalị abụọ na Intercontinental Moorea Resort na Spa na abalị abụọ na Maitai Rangiroa, yana njem njem n'etiti agwaetiti, ịnweta ebe nlegharị anya mpaghara na $ 2,000 akwugo ugwo iji hazie njem a tinyekwara.
Ọrụ niile na Enweghị Egwuregwu na-agwụ ike
Ihe dị ka ọkara nke ndị ọrụ oge niile nyochara site na Project: Time Off anaghị ewere ụbọchị ezumike niile ha kwụrụ ụgwọ afọ gara aga. Ndị ọrụ na-enyefe karịa oge ezumike kwesịrị ekwesị, mgbe ha hapụrụ ụbọchị ezumike. Project: Oge Gbanyụọ achọpụtala na njem nwere ike imetụta arụmọrụ ọrụ yana ọdịmma zuru oke:
• Ndị jiri ọtụtụ oge ezumike ha maka njem kọọrọ na ọ dị elu ịnata ụgwọ, ego ma ọ bụ abụọ karịa ndị na-eme obere njem ma ọ bụ na ọ bụghị ma ọlị (pasent 51 ma e jiri ya tụnyere pasent 44) yana ahụike na ahụike ka ukwuu (61 percent jiri ya tụnyere 49 percent).
• Ndị ọrụ na-eji ọtụtụ ụbọchị ezumike ha eme njem nwere obi ụtọ dị ukwuu karịa ndị na-eme njem obere ma ọ bụ na ọ bụghị.
• Pasent 82 nke ndị America chọrọ ohere iji zuru ike ma belata nrụgide site na njem / ezumike.
Na-ejikọ Tahiti na US
Ọtụtụ na-eche na ha ga-abụ otu oge-ndụ, ebe ịwụ ndepụta ndepụta ezumike, agwaetiti Tahiti na agwaetiti French Polynesia dị n'akụkụ Moorea, Bora Bora na Huahine nwere ike ịnweta United ụgbọ elu ọhụrụ na-adịghị akwụsị akwụsị site na San Francisco. Mbido October 30, United ga-abụ naanị onye ọrụ ụgbọ mmiri US na-enye ọrụ na-enweghị nkwụsị n'etiti etiti US na Tahiti. Routezọ ọhụrụ a ga-arụ ọrụ ugboro atọ kwa izu ma na-enye ọrụ oge site na March 28, 2019 na ụgbọ elu Boeing 787-8.
Asọmpi a gafere Septemba 25 ma a ga-ahọrọ ndị mmeri na October 15 ma ọ bụ gburugburu.